Shiinaha Capsule PET Blue warshad iyo soosaarayaasha | Baakadaha Qianduo
Waxyaabaha ugu Muhiimsan Dhalooyinka Daawada Daawada Daawada
1. Baakadaha go'doomin sare. Baakadaha go'doominta sare waa adeegsiga agabyada leh go'doomin aad u fiican si loo xakameeyo gaaska iyo uumiga biyaha. Ur, iftiin, iwm xirmada si loo hubiyo waxtarka daroogada. Baakadaha go'doominta sare ayaa si ballaaran looga isticmaalay Yurub iyo Japan. Si kastaba ha noqotee, Shiinaha ayaa soo bandhigtay PVDC iyo xirmooyinka kale ee go'doominta sare ilaa 1980s, laakiin koritaankiisu wuu gaabis yahay. Sidaa darteed, koritaanka baakadaha maaddada go'doominta sare waa isbeddel weyn oo ka mid ah baakadaha dabacsan ee Shiinaha;
2. In kasta oo jawiga nadiifka ah ee soo-saarista daroogada loo qorsheeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha GMP, foomka qiyaasta daawadu ma noqon karto mid nadiif ka ah hannaanka wax soo saarka iyo baakadaha. Sidaa darteed, si loo dheereeyo nolosha shelf ee daroogada loona hubiyo amniga isticmaalka daroogada, waa inaan aqbalnaa qalabka bakteeriyada polymer-ka ee bakteeriyada loogu talagalay baakadaha daroogada sida ku xusan shuruudaha GMP, si loo xakameeyo wasakheynta bakteeriyada, taas oo sidoo kale noqon doonta mid ka mid ah tilmaamaha baakadaha dabacsan ee daroogada;
3. Baakadaha "Cagaaran" Baakadaha "cagaaran" ee daawooyinka waxaa loola jeedaa baakadaha aan waxyeello u lahayn bey'ada deegaanka iyo caafimaadka dadka, walxaha baakadahana dib ayaa loo isticmaali karaa. Kadib hirgalinta istaandarka ISO1400, horumarinta baakadaha "cagaaran" waxay noqotay wax muhiim ah. Mustaqbalka, waxaan xor u noqon doonaa inaan horumarino oo aan guud ahaan qaadanno agabyada cusub ee baakadaha ilaalinta deegaanka sida dib-u-warshadaynta, xaalufinta, ku noqoshada dabeecadda, dabka oo aan lahayn wasakheynta hawada;
4. Baakadaha cabbiraadda oo ka yar. Baakadaha cabbiraadda ka yar ayaa u baahan in baakadaha gudaha ee daroogadu leeyihiin shaqaynta cabbirka cabbirka, oo ay ku jiraan adeegsiga agabyada baakadaha ee leh natiijooyinka cabbirka iyo baakadaha isticmaalka mar keliya, tan dambena waa baakadaha cabbiraadda guud ee ka yar. Dalka Mareykanka, hal mar baakadaha ayaa si weyn loogu isticmaalay 1990. Iyadoo la horumarinayo walxaha isku dhafan iyo koritaanka tiknoolajiyada baakada ee Jun, Shiinaha wuxuu awood u yeeshay inuu si wax ku ool ah u damaanad qaado saxnaanta dareeraha iyo baakadaha hal mar oo adag, laakiin waxay sii wadi doontaa inay koraan baakadaha cabbirka yar, oo ku habboon oo sax ah.
5. Baakadaha xeerarka deegaanka. Waxa loogu yeero "baakada qawaaniinta deegaanka" waa in la badalo xaalada gaaska ee baakada isla markaana la damaanad qaado tayada alaabada la soo baakadeeyay mudo dheer, sida baakadaha lagu xiray wax baabi'iye ah (oxygen absorbent), iyo baakada oo lagu beddelayo jawiga ( buuxinta nitrogen, iwm.).
6. Baakadaha suuxdinta. Baakadaha "Aseptic" ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee lagu dilo Jun isla markaana lagu darsado daroogada deegaanka "aseptic" iyadoo la adeegsanayo diilinta tiknoolajiyada 'Jun' ee heerkulka degdegga ah. Qalabka isku dhafan ayaa badanaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo xaaladaha kala duwan ee soo-saarka iyo wax-u-sameynta isku-xirnaanta baakadaha. Waxay leedahay faa'iidooyinka isku xirnaanta wanaagsan ee maaddooyinka daroogada, kordhinta nolosha shelf, keydinta tamarta, kharashka baakadka oo hooseeya, si sahlan loo ogaan karo baakada ilaalinta deegaanka, iwm. walxaha baakadaha. Tusaale ahaan, baakadaha khariidaduhu waxay go'aansan karaan beddelka cabbirka saxanka iyo sawirka aluminium si ay u gaaraan xirmooyinka taxanaha ah. Iyadoo hirgelinta OTC ee warshadaha dawooyinka ee Shiinaha, Baakadaha taxanaha ah ayaa si sii kordheysa loo qiimeeyaa, waxayna sidoo kale muujineysaa suurtagalnimada mustaqbalka koritaanka baakadaha dabacsan ee daawooyinka;
7. Baakadaha Nano. Codsiga iyo horumarinta nanotechnology iyo nanomaterials-ka berrinka daawada waxay siisaa fursad dahabi ah baakadaha daroogada Shiinaha. Kobaca nanopaper, nanocomposites polymer ku salaysan (pnmc), nanoadhesives iyo baakadaha nanoantimicrobial waxay furi doonaan aagag cusub oo loogu talagalay baakadaha dabacsan ee daroogada ah.
Hore: Dhalo Kaabsal PET Black
Xiga: Dhalo Kaabsal PET Brown